Jumlada VMC850 Shiinaha 3axis taagan CNC xarunta mashiinka toosan Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Lu Young
VMC850 Shiineeska 3axis ee toosan xarunta dhexe ee makiinada cnc
Vmc850 3 dhidibka xarunta makiinada CNC ayaa ah aalad mashiin si otomaatig ah u shaqeyneysa oo heer sare ah kana kooban qalabka farsamada iyo nidaamka CNC. Waxtarka waa 5-10 jeer qalabka caadiga ah. Waxay ku habboon tahay shaqooyinka qaabdhismeedka adag ee leh shuruudaha saxda ah ee sarreeya; iyo farsamaynta yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee noocyo kala duwan oo shaqooyin ah.
1. Nidaamka xakamaynta CNC: GSK, siemens, fanuc, nidaamka xakamaynta syntec ayaa la dooran karaa.
2. Taiwan 16 nooc oo koofiyad ah ama joornaalka aaladda aaladda qalabka nooca disk, bedelka aaladda farsamada gacanta, tilmaamida beddelka qalabka kaliya 1.9 ilbiriqsi
3. Nidaamka dunmiiqa oo buuxa ayaa laga keenay wax soosaarka xirfadeed ee Taiwan iyo soo saarayaasha taageera. Dunmiiqa oo dhan waxaa lagu soo ururiyey xaaladaha heerkulka joogtada ah oo leh nolol dheer.
4. Tijaabinta: Dhammaan qalabka warshaddu waxay soo mareen tallaabooyin kormeer ah sida faragelinta laser, mashiinka nuqul, iyo cabbiraadda dhabta ah.
Shayga VMC850E VMC850 soomaali 855
Cabirka shaashadda (dhererka × ballaadhkiis) mm 1000 * 400 1000 × 500 1000 * 550
Afyare (mm) 5-18x100 5-18x100 5-18x90
Miisaanka ugu badan ee xamuulka qaada (KG) 500 600 600
Safarka X-Axis (mm) 800 800 800
Safarka Y-Axis (mm) 500 500 500
Safarka Z-Axis (mm) 500 500 500
Fogaanta u dhaxeysa sanka dunmiiqa iyo miiska (mm) 105-550 105-605 120-620
Fogaanta u dhexeysa xarunta dunmiiqa iyo tiirka (mm) 450 550 540
Taabashada dunmiiqa BT40-140 BT40-150 BT40
Ugu badnaan xawaaraha dunmiiqa (rpm) 8000/10000/12000
Awoodda mootada dunmiiqa (Kw) 5.5 7.5 / 11 7.5 / 11
Xawaaraha quudinta degdegga ah: X, Y, Z dhidibka (m / min) 16/16/16 (24/24 // 24 tilmaamaha safka)
Xawaaraha goynta degdega ah (m / min) 10
Saxnaanta booska (mm) 5 0.005 5 0.005 5 0.005
Ku celi saxnaanta booska (mm) ± 0.003 ± 0.003 ± 0.003
Nooca Bedelka Qalabka 16 aaladda qalabka wax lagu beddelo nooca qalabka (ikhtiyaar u ah nooca gacanta 24 beddel qalab otomaatig ah)
Ugu badnaan dhererka qalabka (mm) 300
Ugu badnaan Dhexdhexaadiyaha qalabka Φ80 (qalab ku dhow) / φ150 (maahan aalad isku dhow)
Max.tool miisaanka (KG) 8
Waqtiga beddelka qalabka (qalab-ilaa-qalab) sec 7
Cadaadiska hawada (Mpa) 0.6
Miisaanka mashiinka (KG) 4200 5500 5800
Sizse guud (mm) 2600 * 2300 * 2300 2600 * 2300 * 2300 2800 * 2400 * 2400
Xarumaha makiinadaha CNC waxaa loo isticmaali karaa wax soo saarka caaryada, qaybo sanduuqa qaabeeya, qaybo qaloocan, qaybo qaab-gaar ah leh, taarikada, gacmo-gacmeedka, qaybaha saxanka, iyo qaybo tiro-soo-saaris xilliyeed ah. Ku habboon warshadaha isgaarsiinta, warshadaha wax soo saarka baabuurta, warshadaha 3c, warshadaha aerospace, iwm.
1. Muddada dammaanadda ee mashiinka oo dhan waa 12 bilood.
2. Bixinta adeegyada dibada.
3. 7 × 24 saac adeegga khadka tooska ah.
4. Tababar bilaash ah ayaa laga heli karaa warshada.
Hore: VMC650 Xawaaraha sare 3 dhidibka mashiinka axdi qarameedka birta toosan
Xiga: vmc1060 warshad bir ah 3 dhidibka xarunta mashiinka axdi qarameedka toosan
Awr22 diamond goynta daawaha darafta biinanka ma ...
XH7126 dhaqaale goynta bir CNC CNC axdi qarameedka machi ...
BC6085 Qalabka Warshadaynta Qalabka Mashiinka oo ...